I-PowerInbox: Iplatifomu yemiyalezo emininzi yeMultichannel | Martech Zone
NgoMvulo, Novemba 16, 2020 NgoMvulo, Novemba 16, 2020 UJeff Kupietzky
Njengabathengisi, siyazi ukuba ukubandakanya abaphulaphuli abafanelekileyo ngomyalezo ofanelekileyo ngaphezulu kwesitayile esifanelekileyo kubalulekile, kodwa kunzima kakhulu. Ngamajelo amaninzi kunye namaqonga-ukusuka kumajelo asekuhlaleni ukuya kwimidiya yesiko- kunzima ukwazi ukuba ungayityala phi iinzame zakho. Kwaye, ewe, ixesha sisixhobo esiphelileyo-kuhlala kuninzi ekufuneka ukwenzile (okanye onokuba ukwenzile), ngaphandle kwexesha kunye nabasebenzi bokwenza.
Abapapashi bedijithali baziva olu xinzelelo mhlawumbi ngaphezulu kunalo naliphi na elinye ishishini, ukusuka kwiindawo zeendaba zemveli ukuya kwiibhloko zokupheka, indlela yokuphila kunye niche, upapasho olunomdla ngokukodwa. Ukuthembela kumajelo eendaba kumhlaba ongagungqiyo, kwaye oko kubonakala ngathi ziigazillion kwiindawo ezahlukeneyo ezikhuphisanayo nokuqwalaselwa ngabathengi, ukugcina ababukeli bebandakanyekile ayisiyiyo eyona nto iphambili- ngumbandela wokusinda.
Njengoko abathengisi besazi, abapapashi baxhomekeke kwintengiso ukugcina izibane zikhanya kunye neeseva zingcungcutheka. Kwaye siyazi ukuba ukufumana ezo ntengiso phambi kwabaphulaphuli ekujoliswe kubo kubalulekile ekuqhubeni ingeniso. Kodwa njengoko ii-cookies zomntu wesithathu ziphelelwe lixesha, ukujolisa kwabaphulaphuli kuye kwaba ngumceli mngeni omkhulu ngakumbi.
Abathengi banamhlanje banolindelo oluphezulu kakhulu lokwenza umntu-enyanisweni, phantse ba-3 kwaba-4 bathi abayi kuzibandakanya ngomxholo wentengiso ngaphandle kokuba ulungelelaniswe nomdla wabo. Leyo yinkxalabo enkulu kubapapashi nakubathengisi- ukudibana komgangatho ophakamileyo kuya kusiba nzima njengoko iinkxalabo zabucala zedatha zingqubana nemigangatho ephezulu yokwenziwa komntu. Kubonakala ngathi sonke sibanjiwe kwiCatch 22!
Iqonga lePowerInbox lisombulula ifayile ye- Imfihlo yabucala / yokwenza ubuqu yabapapashi, ebavumela ukuba bathumele imiyalezo ezenzekelayo, eyeyakho kubabhalisi ngaphezulu kwe-imeyile, iwebhu, kunye nesaziso sokutyhala-iindlela zokungena ngokupheleleyo. Ngebhokisi yePowerInbox, nawuphi na umpapashi wesayizi angathumela umxholo olungileyo kumntu olungileyo kwisitishi esifanelekileyo ukuqhuba impendulo.
Ukusekwa komxholo osekwe nge-imeyile
Nantsi indlela esebenza ngayo. Kutheni i-imeyile?
Kukhethwe ukuba bangene, ukuze abasebenzisi babhalise / bavume ukufumana umxholo, ngokungafaniyo neicookies ezisebenza ngasemva kwemiboniso.
Iyaqhubeka kuba ibotshelelwe emntwini, hayi isixhobo. Iicookies zigcinwa kwisixhobo, oko kuthetha ukuba abapapashi abazi ukuba ikwangumsebenzisi omnye xa bevela ekusebenziseni i-iPhone kwi-laptop yabo. Nge-imeyile, i-PowerInbox inokulandela umkhondo wokuziphatha komsebenzisi kwizixhobo nakumajelo onke kwaye ijolise kumxholo olungileyo ngokufanelekileyo.
Kuchanekile ngakumbi. Ngenxa yokuba iidilesi ze-imeyile kunqabile ukuba kwabelwane ngazo, idatha yahlukile kulowo mntu, ngelixa ii-cookies ziqokelela idatha kuwo wonke umsebenzisi wesixhobo. Ke, ukuba usapho lwabelana ngecwecwe okanye ilaptop, umzekelo, idatha yecookie ngumama odadayo, utata kunye nabantwana, okwenza ukuba ujoliso lube nzima. Nge-imeyile, idatha ibotshelelwe ngqo kumsebenzisi ngamnye.
Nje ukuba i-PowerInbox ichonge umntu obhalisileyo, i-injini yayo ye-AI emva koko ifunde ukuba umdla wabasebenzisi ngokusekwe kukhetho olwaziwayo kunye nokuziphatha ukwakha iprofayile yomsebenzisi echanekileyo. Okwangoku, isisombululo sithintela umxholo wabapapashi ukutshatisa umxholo ofanelekileyo kubasebenzisi ngokusekwe kwiprofayile yabo eyaziwayo kunye neziganeko ngexesha langempela.
I-PowerInbox emva koko ihambisa ngokuzenzekelayo umxholo ogqityiweyo kubasebenzisi nge-imeyile yewebhu okanye ngesaziso sokutyhala ngokusekwe kwisitishi esibonise ukuqhuba ukuzibandakanya okuphezulu. Njengoko iqonga lisebenza, lihlala lisulungekisa ukhuphelo lomxholo kwaye lihlaziya ngokuqhubekayo imodeli yokwanda ngokuthe ngqo.
Ngenxa yokuba umxholo ubaluleke kakhulu kwaye uluncedo, ababhalisile kunokwenzeka ukuba bacofe, baqhube ukuzibandakanya kunye nengeniso yomxholo wokwenza imali wabapapashi. Ngcono nangakumbi, i-PowerInbox inikezela ngeendlela zokwenza imali ezakhelweyo, ukuvumela abapapashi ukuba bafake umxholo wentengiso ngqo kwii-imeyile zabo kwaye batyhale izaziso.
Iqonga lokusetha-kwaye ulibale-ukuvumela ukuba abapapashi bagcine abaphulaphuli bezibandakanya nomxholo oguqulweyo ngokwawo nakweyiphi na inqanaba-into engenakwenzeka ngaphandle kweqonga elizenzekelayo lePowerInbox. Kwaye, kuba ukufakwa kwentengiso kwenzeka ngokuzenzekelayo, kugcina abapapashi ixesha elininzi lokufomatha kunye nokuthengiswa kwempahla. Idibanisa noMphathi weNtengiso kaGoogle, ivumela abapapashi ukuba batsale intengiso yoyilo ngokuthe ngqo kwi-inventri ekhoyo ye-intanethi ngaphandle komzamo.
Kutheni kufuneka abathengisi bakhathalele
Iqonga lePowerInbox kufuneka likwiradar yabathengisi ngezizathu ezibini:
Phantse lonke uphawu ngumshicileli kwezi ntsuku, ehambisa umxholo webhlog, ukukhushulwa kwe-imeyile kunye nokutyhala kwezaziso kubabhalisi. Abathengisi banakho ukumilisela iqonga lePowerInbox ukulawula umxholo kunye nokusasazwa kwemixholo emininzi, kunye nokwenza imali. Amabhanti angafaka iintengiso zamaqabane kwiimeyile zabo okanye alahle ezabo iingcebiso zemveliso ezikhethiweyo njenge "ntengiso" kwii-imeyile zabo zentengiselwano, bacebisa iigloves ezintle ukuba zihambisane neebhutsi ezintsha, umzekelo.
Intengiso kunye nabapapashi bedijithali usebenzisa iqonga lePowerInbox lithuba elihle lokubeka uphawu lwakho phambi kwabaphulaphuli abajolise kubo kunye nababandakanyekayo. Kwanangaphambi kobhubhane, 2/3 yababhalisi bathi baya kucofa kwintengiso kwileta yeendaba ye-imeyile. Ngaphezulu kweenyanga ezintandathu ezidlulileyo, i-PowerInbox ibone ukonyuka kwama-38% kwi-imeyile evulayo, oko kuthetha ukuba ukubandakanyeka kwe-imeyile kuyenyuka. Kwaye iipesenti ezingama-70 zabasebenzisi sele bebhalisile ukutyhala izaziso, ke ngoko kukho amandla amakhulu apho, ngokunjalo.
Njengoko abaphulaphuli belindele ngakumbi kubathengisi ngokubhekisele kubuntu kunye nomxholo owenziwe ngokwesiko, amaqonga anjengePowerInbox abonelela nge-AI kunye nezinto ezizisebenzelayo ezinokusivumela ukuba sifezekise loo migangatho iphakamileyo kwinqanaba. Kwaye, ngokunika abaphulaphuli bethu ngaphezulu kwento abayifunayo, sinokwakha ubudlelwane obomeleleyo, obunomdla ngakumbi obuqhuba ukuthembeka kunye nengeniso.
Fumana iDemo ye-PowerInbox
tags: ukwenziwa kwe-imeyileiqonga lemiyalezoImiyalezo emininziibhokisi lebhokisi
UJeff usebenza njenge-CEO ye-PowerInbox, inkampani yetekhnoloji entsha enceda iinkampani zenze imali ngeeleta zazo ze-imeyile ngomxholo onamandla. Phambi kokujoyina i-PowerInbox, uJeff wasebenza njengoMongameli kunye ne-CEO kwi-Oversee.net, elawula ukusebenza kwehlabathi kunye nokwakha iipotifoliyo zamagama ezesizinda kunye neendawo ezisebenza kuzo zibe lelinye lawona makhulu ehlabathini, emisela inkampani njengenkokheli kwimpahla ye-Intanethi. Ngaphantsi kobunkokheli bakhe, inkampani yahluka kwisizukulwana esikhokelayo, yakha ukukhula okuphezulu okuphezulu kunye namashishini aphakamileyo aphezulu. Ngaphambi koko, uKupietzky wasebenza kwizikhundla zobunkokeli ngeX1 Technologies, Digital Insight (Intuit), iSiebel Systems (Oracle), kunye neLoudcloud / Opsware (Hewlett-Packard). UJeff waqala umsebenzi wakhe wokuba ngumcebisi weMcKinsey & Co, ephuhlisa izicwangciso zeshishini zesoftware, i-inshurensi kunye nabathengi bebhanki. Isithethi esihamba rhoqo kwiinkomfa zeDijithali yeendaba, ukwabonakalisiwe kwi-CNN, CNBC, nakwiindaba ezininzi nakwiimagazini zeshishini.